Maxay ka midaysan yihiin Istaraajiiyadaha lagu fashilayay Madaxwaynihii Hore iyo kuwa hor yaala kan Hadda ka taliya Somalia,? – Hornafrik Media Network
Maxaad kala socotaa waxyaabaha ay ka mideysan yihiin Qorshihii Madaxweyne Hassan Sheikh la koowsaday ee loogu magac daray SOMALIA VISION 2016 iyo qorshahaan cusub oo Madaxweyne Farmaajo la koowsaday oo loogu magac daray SOMALIA SECURITY ARCHITECTURE?
* Labada qorshaba Soomaali ma laheyn .waxaana hawl fududeeye ka ahaa Masuuliyiin ku dhowaa Madaxweyne Hassan Sheikh iyo Farmaajo oo kala ah agaasimihii Madaxtooyadda Kamal Gutale iyo La taliyaha Amniga Qaranka Hussein Damuumaaye.
* Labada Qorshaba English kaliya ayay ku qoran yihiin oo xataa waa la sameyn kari waayey in Af Soomaali lagu bedelo si loogu ekeysiiyo qorshe Soomaali leedahay.
* Somalia Vision 2016 oo cinwaan looga dhigay natiijo qurux badan oo aheyd in dastuurka Federaalka la dhameystiro iyo Somalia doorasho hal qof hal cod ah in ay ka dhaceyso wuu fashilmay, sababta oo aheyd qaabka natiijadaa lagu gaarayo oo laga dhigay qorshe dawladda Federalka Somalia baarlamaankeeda iyo xukuumadeeda awooda looga qaaday lagana dhigay inay ka heshiinayaan Dawladda Federaalka iyo Dawlad goboleedyadda, heshiiskaa dawladdaha oo aan dhaceyn, maadaama Madaxdaa xariga looga hayo meelo kale.
* Qorshaha SOMALIA NATIONAL SECURITY ARCHITECTURE ayaa ah mid natiijo qurux badan cinwaan looga dhigay laguna sheegay in ciidamada Xooga Dalka dib loogu dhisayo balse halkii loo mari lahaa dib u dhiskaa ciidanka Qaranka laga dhigay mid ay qeybsanayaan Dawladda Federaalka iyo Dawlad Goboleedyadda, sidoo kalana qorshahaa fulintiisa laga dhigay mid ay ka wada tashanayaan golaha Amniga qaranka oo isla qorshahaan lagu dhisay, golahaa oo awooda Xukuumadda, Baarlamaanka iyo Aqalka Sare ee Federalka Somalia awooda looga qaadey laguna wareejiyey gole ka kooban Madaxweynaha Dawladda Federalka iyo Madaxweynayaasha Dawlad Goboleedyadda si lamid ah Qorshihii SOMALIA VISION 2016, xubnaha Golahaan oo aan ku heshiin karin dan Soomaaliyeed sida laga bartay madaxdaan.
* Labada Qorsheba waxaa taageeeay Beesha Caalamka iyo Wakiiladda UN-ka Somalia oo qorshaha asalkiisaba lahaa.
* Labada Qorshe-ba waxaa loo diyaariyey qaab shacabka uu u qaadanayo in Somalia dawlad ku noqoneyso balse u habeysan inaan hore loo dhaqaaqin.
* Labada Qorshaba waxaa looga hortagayey in Somalia qorshe ay iyaddu leedahay oo hore ugu dhaqaaqeyso sameysato mudada Madaxweynaha Xilka hayo oo 4-ta sano ah.
* Labada Qorshaba oo ah kuwo aan shaqeyneyn waxaa laga dhigay in dawladda Somalia leedahay, masuuliyadda Fashilkana waxaa yeelanaya Madaxda Somalia.
* Labada Qorshaba waxay calaamad u yihiin madaxda Soomaaliya in wadaniyadda ku yartahay , muhiimna ay u tahay kaliya in xukunka haystaan iyaga oo aqbala qorshayaal aan u hiilineyn in Somalia dib cagaheeda isugu taagto.
* Labada Qorshaba waxay calaamad u yihiin faragelinta taban ee Somalia lagu hayo loogana ilaalinayo dawlad hana qaada.